PE elingenalutho Igridi Ishidi Production Line - China Qingdao JBD Imishini
PE elingenalutho Igridi Ishidi Production Line
PE elingenalutho iphrofayela ishidi ziphephile ukukhanya eliphezulu ngokwedlulele transmittance. Lo mkhiqizo amelana sezulu, umlilo, umthelela, futhi isisindo ukukhanya, insulates ukushisa, futhi linamandla UV imisebe. Ezinye izicelo eziningi zihlanganisa nesembozo ukukhanya, zokugcina, decor ingaphakathi, umsindo okuhlola panel kanye nokukhangisa ezikhangiso.
PE elingenalutho iphrofayela Ishidi engasindi, umthelela namafutha nemithi, futhi amanzi. Izicelo zihlanganisa emaphaketheni iziqukathi, ukubonisa panel, ukusetshenziswa nsuku zonke izinto, izinto zokubhala, futhi emaphaketheni zokuzivikela yezinto zokwakha. PP zingase zimiswe ku noma iyiphi ukuma uhlobo lomkhiqizo ezifana inzuzo amabhokisi, ingxenye amabhokisi ngodonga plastic. Lena impahla esihle kabanzi ngokuvikela izingxenye electronic.
Main Technical Ukucaciswa
extruder Ukucaciswa SJ120 SJ100
imikhiqizo Ububanzi 2100mm 1220mm
imikhiqizo wugqinsi 2-8mm 2-8mm
Main Motor Amandla 132kw 110kw
Umthamo (Max.) 350kg / h 200kg / h
extruder Ukucaciswa SJ120, SJ45 SJ100, SJ45
imikhiqizo Ububanzi 2100mm 1300mm
imikhiqizo wugqinsi 4-40mm 4-40mm
Main Motor Amandla 185kw / 22kw 132kw / 22kw
Umthamo (Max.) 450kg / h 300kg / h
Qingdao Jinbei Machinery Co., Ltd iyinhlangano corporation esibanzi zokuhlanganisa ucwaningo lwesayensi nokuthuthuka, izimboni, amapulazi akhiqiza innovation (kokubonisana), nokukhangiswa. Siyilungise ku ukuthuthukiswa "ulinde izinga, ukuthuthukisa kobuchwepheshe, amasiko lokuqala" selokhu kwasekelwa inkampani. Inkampani yethu kuveza edolobheni elihle Qingdao, traffic elula nezindawo ezinhle isifikisa ukuthuthukiswa inzuzo. Ngokusekelwa enkulu amakhasimende amaningi nabangane, inkampani yethu eba ngokushesha futhi uye kwakheka inkampani iqembu nge ucwaningo lwesayensi, ukukhiqiza, ezohwebo kanye kungasebenzi. Sihlonipha ulwazi, kwamukele amathalenta wazibeka izikhundla ezibalulekile. Sithatha ngobuchwepheshe; ukuhlolwa esiqinile njengoba isiqondiso ukuthuthukiswa, isungule eziningi izinhlobo plastic umugqa production , ezifana plastic ibhodi / ishidi umshini ,plastic ipayipi umshini ,plastic umshini iphrofayli ,umshini WPC ,plastic kabusha umshini , njll
Nge bonke abasebenzi, umphathi-jikelele iyakwamukela ngobuqotho bonke abangane ukuvakashela!
Uma ngibheka China pe eziyize igridi ishidi ukukhiqizwa umugqa, intengo, izindleko, ukudayiswa, noma we-PDF, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi, thina simunye ehola elingenalutho Igridi Ishidi Production Line, Plastic ukukhiqizwa Line, Igridi Ishidi Production abakhiqizi Line nabaphakeli.
Previous: 10mm Solid Polycarbonate Ishidi Abanikezeli
Olandelayo: PVC Izinkuni Plastic Door IBhodi Production Line
Igridi engenalutho Ishidi Ukwenza Machine
Layer Multi Ishidi Production Line
Pc Ishidi Imishini
Pc Ishidi Ukwenza Machine
Pe Kk Pc elingenalutho Igridi Ishidi Production Line
Pet Ishidi Imishini
Pet Ishidi Ukwenza Machine
Pmma Ishidi Imishini
Pmma Ishidi Ukwenza Machine
IHu Ishidi Imishini
IHu Ishidi Ukwenza Machine
PVC Ishidi Machine
Layer Single Ishidi Imishini
Layer Single Ishidi Production Line
Solid & okungabonakali Ishidi Production Line
Transprent Ishidi Imishini
Transprent Ishidi Ukwenza Machine
Ishidi Transprent Production Line
Pmma Ishidi Ukwenza Extruding Machine
PVC futhi EVA Mono Noma Multi Ungqimba Ishidi Productio ...
PVC Ishidi Extrudion Line
PET Ishidi extrusion Line
PC Solid Ishidi okungabonakali Production Line
10mm Solid Polycarbonate Ishidi Abanikezeli